Libya: Madaxa dowladda ay taageerto QM oo is casilaya | Gaaroodi News
Libya: Madaxa dowladda ay taageerto QM oo is casilaya
Fayez al-Serraj waxaa ra`iisul wasaare loo doortay sanadkii 2015
Madaxa dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee saldhiggeedu yahay magaalada Tripoli ee dalka Libya, Ra`iisul Wasaare Fayez al-Serraj, ayaa ku dhawaaqay inuu doonayo inuu is casilo dhammaadka bisha October.
Hadalkan oo uu kaga dhawaaqay khudbad muuqaal ahayd, ayuu ku sheegay inuu doonayo inuu xilka ku wareejiyo gole cusub oo lagu dooran doono wada hadallo u dhaxeeya dhinacyada Libya oo bisha soo socota ka dhici doona Geneva.
Al-Serraj waxaa cadaadis uga yimid dhinacyo ka tirsan dowladda Tripoli iyo dibadbaxyadii dhowaan looga soo horjeeday xaaladaha nolosha dalkaas ee ka sii daraya iyo musuqmaasuqa dowladda.
Heshiis ay Qaramada Midoobay garwadeen ka ahayd oo ka dhacay magaalada Skhirat ee dalka Morocco bishii December sanadkii 2015 ayaa loogu doortay inuu noqdo ra`iisul wasaare iyo madaxa golaha madaxtinnimada ee Libya.
Dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Turkiga, Mevlut Cavusoglu, ayaa sheegay in Turkiga iyo Ruushka ay ka wada xaajoodeen xabbadjoojin ka dhacda Libya.
Turkiga iyo Ruushka ayaa kala taageera dhinacyada isaga soo horjeeda dalkaas.